Ma jiro Qof Dan ka Leh Blog-kaaga! | Martech Zone
Arbacada, Maarso 14, 2007 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Maalin kasta waxaan helayaa ugu yaraan hal feker oo ku saabsan qoraalkayga. Kama qaado dambi. Waxaan u maleynayaa naftayda, "waa wax blogger ah, ma fahmi doontid".
Runta waxa ay tahay in aan ixtiraam weyn u hayo dadka wax qora iyo kuwa wax qora. (Fadlan la soco waxaan idhi ixtiraam 'ka weyn'. Ma odhan ma ihi xushmad aan u hayo dadka aan wax qorin ee wax qora.
Waxaa jira sababo dhowr ah:
Bloggers waxay si xor ah u wadaagaan aqoonta.
Bloggers waxay caqabad ku yihiin fikirka caadiga ah.
Bloggers waxay raadinayaan aqoon.
Bloggers waa geesinimo, naftooda u furaya dhaleeceyn weyn oo deg deg ah.
Bloggers waxay isku xiraan dadka u baahan iyo kuwa xalka leh.
Bloggers si dhab ah ayey u eryanayaan runta.
Bloggers waxay daryeelaan dhagaystayaashooda.
Marka, waad igu qosli kartaa kuna qosli kartaa balooggeyga. Waan jeclahay xirfadeyda suuqgeynta iyo tikniyoolajiyadda waana jeclahay wax ku qorista wax kasta oo aan bartay. Waxaan raadinayaa aqoon iyo jacayl aan la damin karin markaan helo ama u gudbiyo xoga yar ee macluumaadka xaliya dhibaatada qof.
Waxaan ka walaacsanahay dadka aan jeclayn xirfadooda. Isla marka 5PM ay garaacdo, dadkani waxay si fudud u jaan qaadaan, damiyaan oo ay guryahooda aadaan. Adduunku wuu isbedelayaa iyaga, tartankuna waa soo qabanayaa, teknoolojiyad cusub ayaa adduunka looga furayaa laakiin iyagu ma xiiseeyaan. Guryahoodii bay aadaan sidii iyagoo dhulka god ka qodanaya oo qofna majarafadiisa ka qaatay. Sideed u damin kartaa xiisaha iyo hal-abuurka sida nalka shidan?
Maareynta, hoggaaminta, horumarka, sawirada, naqshadeynta isticmaalaha, isticmaalka, suuqgeynta - kuwani dhammaantood waa shaqooyin u baahan barasho si loo dhiso guul. Haddii aadan ku qanacsanayn shaqadaada ama warshadahaaga, ma lihid xirfad - shaqo uun baad haysataa. Ma doonayo inaan la shaqeeyo dadka shaqo haysta. Waxaan rabaa inaan la shaqeeyo dadka doonaya inay badalaan aduunka.
Waxaan ogaaday in hoggaamiyeyaasha jecel hoggaamintu ay sidoo kale hoggaamiyaan Kaniisaddooda, guryahooda, iyo qoyskooda. Soosaarayaasha jecel xirfadooda waxay horumariyaan xalalka waqtiga firaaqada. Farshaxanada sawirada waxay dhisaan degello cajiib ah waxayna qabtaan shaqo iskood ah Naqshadeeyayaasha Wajahadda Isticmaalaha waxay isku dayayaan codsiyada iyo akhrinta qoraallada ugu dambeeyay. Khubarada isticmaalka ayaa si joogto ah u akhriya una fiirsada natiijooyinka ugu dambeeyay ee cilmiyaysan. Suuqleyda ayaa inta badan saaxiibadood ka caawiya meheraddooda. Shaqo uma lihid dadkaas midkood, ee waa jacaylkooda iyo noloshooda.
Taasi maaha in la yiraahdo waxay ka qaadaysaa qoys ama farxad. Dadkani waxay leeyihiin wax kasta oo ay rabaan waxayna ku faraxsan yihiin noloshooda. Markii aan aqriyay baloogyada, waxaan arkaa xamaasad ay qorayaashani qoraan farsamadooda waana ixtiraamayaa. Waan diidi karaa! Laakiin waan ixtiraamayaa.
Maanta waxaan ka helay qoraal Mark Cuban anigoo ka jawaabaya faallo aan ku qoray bartiisa. Waxay ahayd mid kooban - jawaab celin adag oo ku saabsan faallooyinka aan ku dhajiyay bartiisa. Waan necbahay inaan jeclaado ninkan, laakiin indhahayga kama qaadi karo qoraaladiisa. Waa mid dagaal badan, aftahan ah, oo waxaan u maleynayaa inaan ku raacsanahay wax kasta oo uu yiraahdo. Laakiin waan jeclahay hamigiisa waxaanan u maleynayaa inay noqon doonto wax la yaab leh in lala shaqeeyo qof sidan oo kale ah.
Okay, falsafad ku filan… aan ku dhammeyno qoraal farxad leh. Haddii aan naqshadeyn lahaa funaanad, tani waa sida ay u egtahay:
Tags: bloggershubkaaQofna dan kamalahacidina dan kama gasho bartaada internetka
Si fiican ayaa loo yidhi. Waxaan dhexda ugu jiraa uruurinta codsiyada shaqo furista waxaanan ogaaday in mid ka mid ah su'aalaha 1aad ee aan weydiinayo ay tahay, "qofkani ma leeyahay mareeg ama degel?" Kuwa sameeya oo muujinaya nooc ka mid ah jacaylka waxa ay qabtaan waxay ka sarreeyaan kuwa aan haysan wax websaydh ah.
Laakiin markaa, aad ayaan u xaglinayaa 🙂
Inkasta oo dadka qaarkiis aysan fahmi doonin, hadana waxay noqon laheyd wax qosol badan hadii shaatiga lagu sheegay: -Arp Logo halkan- + Blog! = Gabar saaxiib. 🙂
Doug, waxaan daneeyaa bartaada internetka.
Farriin weyn. Wax badan oo aad i odhan weyday waan kula heshiin kari waayey. Hadda waxaan u baahanahay inaan ka tago "shaqadayda".
Waxaan ka taxaddaraa bartaada, sidoo kale, Doug.
Mararka qaarkood dadka umuuqda inay si kale caqli u leeyihiin oo xitaa xamaasad leh kaliya mahelaan baloog. Kaliya waxaan u dulqaataa inta ay iftiinka arkayaan.
Waad ku mahadsan tahay ragga dhiirigelinta ah! Waan jeclahay baloogyadaada, sidoo kale!
Runtii WAAN rajeynayaa inaad ku sameysatid funaanad fikirkaaga ah (waad isticmaali kartaa kafateeriyada ama shaashadda?).
Intaad kujirtana, fadlan sidoo kale nooca saaxiibkaa ma jiro!
Waxa kaliya ee aan dhihi karo waa inay tahay caqli saafi ah!
Goor dhow oo noqon doona blogger waqti buuxa ah, oo u gudbinaya dhammaan waxyaabaha ku jira wordpress…
Xushmad weyn 2 u. Waan akhriyaa ur blog, in kastoo .. :-)
Doug, waxaan ku cusubahay dunida blogga, hadana waxaan helay isku xirnaan iyo wadaag wadaag furan waqti yar oo aan layaabay.
U fiirsasho weyn oo ku saabsan xamaasadda.
wada shaqeyn miyir leh
Waad ku mahadsantahay faallooyinka kuna soo dhawow barta internetka! Waa tikniyoolajiyad fantastik ah, oo soo koraysa. Ma sugi karo inaan arko halka ay ina geynayso.